Ithegi: owox bi » Martech Zone
Ithegi: owox bi
Ukupheliswa kokuphela kokugqibela kunceda njani amashishini
NgoMgqibelo, Agasti 10, 2019 NgeCawa, Agasti 11, 2019 UMargo Kashuba
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu I-end-to-end analytics ayizizo nje iingxelo ezintle kunye nemizobo. Isakhono sokulandela umkhondo womthengi ngamnye, ukusuka kwindawo yokuqala yokuthintela ukuya kuthengiso oluqhelekileyo, kunokunceda amashishini anciphise iindleko zezitishi zentengiso ezingasebenziyo nezingaphezulu kwexabiso, ukunyusa i-ROI, kunye nokuvavanya ukuba ubukho babo kwi-Intanethi bukuchaphazela njani ukuthengisa ngaphandle kweintanethi. Abahlalutyi be-OWOX BI baqokelele kwizifundo ezintlanu ezibonisa ukuba i-analytics ekumgangatho ophezulu inceda amashishini ukuba aphumelele kwaye abe nenzuzo. Sebenzisa i-End-to-End Analytics ukuvavanya igalelo kwi-Intanethi imeko. A
Ixesha lokuFunda: 10 imizuzu Umbono ka-Simo Ahava we-atypical kumgangatho wedatha kunye nolwakhiwo lonxibelelwano luhlaziya indawo yonke yokuphumla kwi-Go Analytics! inkomfa. U-OWOX, inkokeli ye-MarTech kwingingqi ye-CIS, yamkele amawaka eengcali kule ndibano ukuze babelane ngolwazi lwabo kunye nemibono. Iqela le-OWOX BI lingathanda ukuba ucinge malunga nomba ophakanyiswe nguSimo Ahava, onokuthi ngokuqinisekileyo ube nakho ukwenza ukuba ishishini lakho likhule. Umgangatho weDatha kunye noMgangatho woMbutho